1. inDriver မိုဘိုင်း အက်ပ်ပလီကေးရှင်းကို သင့်ဖုန်းသို့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ပါ။ Play Market နှင့် AppStore တို့မှတဆင့် ရနိုင်ပါပြီ။
2. မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ရေးသွင်းပါ။ သင့်အနေဖြင့် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အတည်ပြုရန်အတွက် စာတို (SMS) မှတဆင့် စိစစ်အတည်ပြုကုဒ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကုဒ်ကို ရေးသွင်းပါ။
3. သုံးမည့်နည်းလမ်း <ယာဉ်မောင်းအဖြစ် သုံးမည်> သို့ <ခရီးသည်အဖြစ် သုံးမည်> ကို ရွေးပါ။ ယင်းနောက်တွင် သင့်အနေဖြင့် အက်ပ်ပလီကေးရှင်းရှိ မီနူးစာရင်းမှတဆင့် သုံးမည့်နည်းလမ်းကို အလွယ်တကူပြန်ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
4. သင့်အချက်အလက်များကို ရေးသွင်းပါ၊ သင့်ဓာတ်ပုံကို တင်ပါ။ ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးအစား၊ အရောင်၊ နံပါတ်၊ ထုတ်လုပ်သည့်နှစ် စသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
5. သင့်အနေဖြင့် ကားခေါ်အမှာစာမှာသည့်နေရာ (desk) ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ တည်နေပြ (GPS) မှတဆင့် အနီးအနားနေရာများရှိ ကားငှါးရန်တောင်းဆိုချက်များကို ပြသပါလိမ့်မည်။ ယင်းစာရင်းမှ သင်နှစ်သက်ရာ လိုက်နိုင်မည့် ဈေးနှုန်းနှင့် ခရီးလမ်းကြောင်းရှိသော ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ရွေးပါ။ ယင်းကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးနောက်တွင် အက်ပ်ပလီကေးရှင်းက သင်နှင့် ခရီးသည်ကို ချိတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
6. သင့်အကြောင်းဖော်ပြချက်ကို <ခရီးသည်ရှိ မအားပါ> သို့ <ခရီးသည်မရှိ လစ်လပ်နေသည်> ဟု ပြောင်းရန် မမေ့ပါနှင့်။ သင်သည် “ခရီးသည်မရှိ လစ်လပ်နေသည်” ဟု အကြောင်းဖော်ပြချက် လုပ်ထားပါက ခရီးသည်မရှိလစ်လပ်နေသောကားများ မြေပုံပေါ်တွင် သင့်အား ခရီးသည်များမှ မြင်နိုင်အောင် လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် “ခရီးသည်ရှိ မအားပါ” ဟု အကြောင်းဖော်ပြချက် လုပ်ထားပါက သင့်အား မည်သူမျှ နှောင့်ယှက် ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိအောင် လုပ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
7. ဒုတိယမြောက် ခေါင်းစီး <ကျွန်ုပ်၏ ကားခေါ်အမှာစာများ> အောက်တွင် သင် မောင်းပို့ခဲ့ပြီးသော ကားခေါ်အမှာစာများကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
8. သင့်အနေဖြင့် မြို့တစ်မြို့မှ တစ်မြို့သို့ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက အက်ပ်ပလီကေးရှင်းရှိ မီနူးစာရင်းကို ဖွင့်လိုက်ပြီး <မြို့တစ်မြို့မှ တစ်မြို့သို့ ခရီးသွားခြင်း> နှင့် <ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း> ခေါင်းစဉ်များတွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ကားခေါ်အမှာစာမှာသည့်နေရာ (desk) တွင် စာပေးစာယူလုပ်ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း၊ ညစ်တီးညစ်ပတ်ပြောဆိုခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ အစားအသောက်နှင့် ကုန်စည်များပို့ဆောင်ရန်ခိုင်းခြင်း၊ အိမ်ငှါးခြင်း အစရှိသော မသက်ဆိုင်သည့် စာတိုများပေးပို့ခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
ခရီးသည်များအနေဖြင့် ကားခေါ်အမှာစာမှာသည့်နေရာ (desk) တွင် လိပ်စာ သို့ ဈေးနှုန်း မပါသော မရေရာမသေချာသည့် ခရီးစဉ်တောင်းဆိုချက်များကို ရေးသားခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် ကားခေါ်အမှာစာမှာသည့်နေရာ (desk) တွင် သူတို့သည် ခရီးသည်မရှိလစ်လပ်နေကြောင်း၊ ဤမှ ထိုသို့ မောင်းပို့ပေးနိုင်ကြောင်း စသဖြင့် ရေးသားခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
ခရီးသည်ထွက်လာရန်ကြာချိန်ကို အများဆုံး ၁၀ မိနစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ယင်းအချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်တွင် ယာဉ်မောင်းကို စောင့်ဆိုင်းရသည့်အတွက် ငွေထပ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသည်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ခရီးမထွက်ရန် စိတ်ပြောင်းသွားပါက ယာဉ်မောင်းထံ ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ပြီး သင့်ကားခေါ်အမှာစာကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း ပြောရမည်။
ယာဉ်မောင်းများအား ခရီးသည်နှင့်အပြိုင် ဈေးဆစ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။ ယာဉ်မောင်းအနေဖြင့် ယင်းဈေးနှုန်းဖြင့်လိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ဖုန်းမခေါ်ပါနှင့်။